Xisbi uu hoggaamin doono Xasan Sheekh oo khamiista looga dhawaaqayo Xamar - Caasimada Online
Home Warar Xisbi uu hoggaamin doono Xasan Sheekh oo khamiista looga dhawaaqayo Xamar
Xisbi uu hoggaamin doono Xasan Sheekh oo khamiista looga dhawaaqayo Xamar
Muqdisho (Caasimadda Online) – Xisbi cusub oo uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in looga dhawaaqo magaalada Muqdisho.
Xisbigan uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in Khamiista looga dhawaaqi doonaa magaalada Muqdisho ayaa loo bixiyey “Midowga Nabadda & Dimoqraadiyadda”, waxaana ku midoobay Xisbiga Daljir iyo Kutladii Horusocod ee xildhibaanadii qabyo ay ku jireen.
Waxaa socdo kulamo la doonayo in lagu ansixiyo dastuurka uu yeelan doono Xisbigaan cusub kaasoo lasoo qoray haddana ay ka doodayaan xubnaha xisbiga.
Sidoo kale waxaa la filayaa in Xisbiga loo sameeyo Guddoomiye kumeel gaar ah inta laga gaarayo shirweynaha Xisbigaan oo dhici doono horaanka sanadka cusub.
Wararka ayaa sheegay in xisbiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ee Wadajir oo hore loogu waday inuu ka mid noqdo xisbigan cusub uu ka hakaday arrimo aan la shaacin dartood, waxaana xisbigan ku mideysan in ku dhow 50 xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Federaalka.